Thenga izityalo zendalo ezikhutshwayo- Umenzi kunye nomzi mveliso
Izicatshulwa zezityalo zendalo
I-Curcumin Powder (458-37-7)
udidi: Ukulwa nokuguga
I-Quercetin dihydrate Powder (6151-25-3)
I-Semen Coiois (Imbewu yokupheka) Vusa
I-Tanshinone ⅡA Powder (568-72-9)
Izicatshulwa zezityalo zendalo: Izinto zokuthintela izityalo zibhekisa kwizinto ezikhutshiweyo okanye ziqhubekisiwe kwizityalo (zizonke okanye inxenye yesityalo) njengezinto ezingafunekiyo zisebenzisa izinyibilikisi ezifanelekileyo okanye iindlela, ezinokuthi zisetyenziswe kumzi-mveliso wamayeza, ushishino lokutya, iSebe lezempilo, uMzi mveliso woBuhle, kunye namanye amashishini .
1. Amagqabantshintshi eZityalo
Izinto zokukhupha izityalo zenziwa kwizityalo njengezinto ezingalunganga. Ngokweemfuno zemveliso abathe bakhutshwa kuyo, bathathwa kukukhutshwa ngokomzimba kunye neekhemikhali kunye neenkqubo zokwahlulahlula ukufumana kunye nokugxila kwisithako esinye okanye ngaphezulu esisebenzayo kwisityalo ngaphandle kokutshintsha ubume bezithako ezisebenzayo. Imveliso enesiphumo. Ngokwezithako ezahlukeneyo, izicatshulwa zesityalo zinokwahlulwa ngokwee-glycosides, iiacids, iipolyphenols, iipolysaccharides, terpenes, ii-flavones, iialkaloids kunye nolunye udidi; ngokweempawu ezahlukeneyo zemveliso, zinokwahlulahlulwa ngokweendidi ezinjengeoyile yemifuno, ikhuphe, umgubo kunye nelensi.
Izichumisi zesityalo zizityebi kwaye zahlukile. Okwangoku, zingaphezulu kwe-300 iintlobo zokwenza kwemveliso ezikhutshiweyo. Yimveliso ephakathi ebaluleke kakhulu enoluhlu olubanzi lwezicelo. , I-cosmetics kunye namanye amashishini.
Iindidi zemveliso zihlala zicebiswa
Ngokwanda kokuqonda, ukuphuculwa kwezixhobo kunye nezixhobo kunye nokwenziwa kweendlela, uphando lomntu kwizityalo nakwimizimba yabantu luza kuqhubeka ukhula, izityalo ezitsha ezihlangabezana neemfuno zomzimba womntu ziya kuqhubeka nokufunyanwa. Iintlobo zemveliso zezicatshulwa zezityalo ziya kuqhubeka nokutyebiswa. .
Iitekhnoloji ezintsha kunye neenkqubo zihlala zisenziwa
Umzi mveliso wokukhupha izityalo ngumzi oxhomekeke kubugcisa. Itekhnoloji yokukhupha izinto eziphambili kunye nezixhobo azikwazi kuphela ukuphucula umgangatho weemveliso zokukhupha, kodwa kunye nokuphucula izinga lokusetyenziswa kwezinto ezingafunekiyo, ukunciphisa inkunkuma yezinto ezingafunekiyo, kunye nokunciphisa iindleko zemveliso. Ngenani elandayo labakhuphisana kumzi mveliso kunye nokhuphiswano oluthe chatha, iinkampani ngokuqinisekileyo ziya kukhetha isicwangciso esiliqili sokuphucula ubuchwepheshe kwaye siphuhlise iinkqubo ezintsha zokwenza ithuba lokukhuphisana kunye nokubamba imarike.
3. Iimveliso zokuthengisa ezithandwayo nezishushu
① Ginkgo Biloba Isicatshulwa
[Izithako ezisebenzayo kunye neziphumo] Izithako ezisebenzayo ezikhutshwe kwiGinkgo biloba ikakhulu zii-flavonoids, i-ginkgolides, ii-alkylphenols kunye ne-alkylphenol acids. Iziphumo zayo zahlukile, phakathi kwazo: I-Ginkgo flavonol glycosides zizinto eziguqula amandla emithambo, inyusa ukuphuma kwegazi leswekile, ukwandisa imithambo yegazi emithanjeni, inokuthintela ngokufanelekileyo nokunyanga izifo zentliziyo, kwaye ineziphumo ezizodwa kunyango lwe-angina pectoris kunye ne-myocardial infarction. I-scavenger ye-perodium free radicals, enokuphelisa i-radicals yasimahla enefuthe eliyityhefu kwizifo zentliziyo kunye ne-cerebrovascular endothelial cell, kwaye ine-anti-ukuguga, anti-cancer kunye neminye imisebenzi yokhathalelo lwempilo. I-Ginkgolides zizinto zokuhlanganisa iiplatelethi, ezinokunyanga i-asthma, allergia yemiphunga, ukungaphumeleli kwentliziyo nezinye izifo. I-Ginkgolide sisiyobisi esisebenzayo kwizifo zenkqubo ye-nervous, kwaye inegalelo elibalulekileyo kunyango lwesifo se-Alzheimer. Inomsebenzi wokulwa nokuguga kwe-nerve endings, ngenxa yoko inefuthe lokulwa nokwaluphala.
② I-Phooioin Rosea PE
[Isithako esisebenzayo] Esona sithako sisebenzayo yiSalidroside kunye neaglycon yayo, ebizwa ngokuba yiP-Tyrosol. Ukongeza, iqulethe i-18.07% tannin, isitashi, amafutha, i-asidi, i-organic acid, iprotein, flavonoids, kunye nezinto ezilandelwayo zesinyithi, ukukhokelela, i-zinc, isilivere, cobalt, titanium, molybdenum, manganese, njl.
[Ukusebenza kakuhle] Inesiphumo esiphakathi sokuthintela amandla, isiphumo sokungakhathali, isiphumo sentliziyo, isiphumo sokuchasene nokuvuvukala, ukuthintela isiphumo sokuphakama kweswekile yegazi, isiphumo se-anti-peroxidation effect, anti-microwave radiation.
③ I-Astragasli PE
[Izithako ezisebenzayo] Izinto zeekhemikhali zezityalo zeAstragalus ikakhulu zii-monosaccharides, i-polysaccharides, i-saponins, i-flavonoids, i-amino acid, kunye nezinto zomkhondo, phakathi kwawo umxholo we-polysaccharide ungaphezulu. Izithako ezisebenzayo zamayeza yi-astragalus polysaccharide, i-astragalus saponin, kunye ne-flavonoids.
[Ukusebenza kakuhle] Ukuchasana nokwaluphala: Ukucanda iidrafikhi zasimahla; Impembelelo kumzimba wokuzivikela: I-Astragalus polysaccharide ingaphucula kakhulu ukungakwazi komzimba kunye nefuthe kwimetabolism yomzimba: I-Astragalus polysaccharide ingayonyusa amandla emzimbeni weeseli zomntu kwaye inganyusa kakhulu iseli yethambo hematopoietic iiseli ze-DNA ziyakhawulezisa inkqubo yokwahlulwa kweeseli ze-nucleated kwaye ine- imigaqo-nkqubo emibini yemilinganiselo yegazi glucose emzimbeni; enye: anti-tumor effect kwaye yandisa ukusinda kwayo.
Izinto ezikhutshwayo ngamayeza